I- # 1 Isizathu sokuba iinkampani zisilele kwi-Injini yokuSebenzisa | Martech Zone
I # 1 Isizathu sokuba iinkampani zisilele kwi-Injini yokuSebenzisa
NgoLwesithathu, uDisemba 10, 2014 NgoLwesithathu, uDisemba 10, 2014 Douglas Karr
Ukuba kukho into enye endicaphukisayo xa isiza enjini yokukhangela noun, kuxa umntu etyhala umva ngokuchasene nophuhliso okanye utshintsho lwesiza kuba funda okuthile kwenye indawo. Ukuba indawo yakho iyanya kwinqanaba kwaye awukwazi ukuphucula amanqanaba, kuya kufuneka ulungiselele. Ukushiya indawo ekuyo ngenxa yokuba funda okuthile kwenye indawo ikufumana iziphumo ezichanekileyo onazo ngoku… akukho.
Isizathu # 1 sokuba iinkampani zisilele ekusebenziseni injini yokukhangela kungenxa ye- funda okuthile kwenye indawo isingxengxezo sokungenzi nto. Endaweni yokusebenzisa izixhobo kuphuhliso novavanyo, omnye umphuhlisi uhleli kwigumbi elingasemva egxotha iiforamu zikaGoogle ukukhusela indawo yakhe yokuba akufuneki ayenze nhle indawo. Iyahlekisa.
Isenzo, inkqubo, okanye indlela yokwenza into (njengoyilo, inkqubo, okanye isigqibo) njengokugqibelela ngokupheleleyo, ukusebenza, okanye ukusebenza ngokufanelekileyo; ngokukodwa: iinkqubo zezibalo (njengokufumana ubuninzi bomsebenzi) obandakanyeka koku. Isichazi-magama seMerriam-Webster
Iinjini yokukhangela azinayo imigaqo okanye uluhlu lokutshekisha lokuqinisekisa ukuba indawo yakho ikwindawo efanelekileyo. Iqela kuGoogle libonelele ngezinto ezisisiseko onokuzenza kunye nezixhobo zokubeka iliso kwimpumelelo yakho. Baza kukuxelela ukuba uqiniseke ukuba indawo yakho ihambile, qiniseka ukuba iyakhawuleza, qiniseka ukuba awuthinteli iinjini zokukhangela… kwaye banikezela ngezinto ezininzi onokuzenza ukuphucula amava akho okukhangela - imephu zesayithi, amakhonkco e-canonical, iinkcazo zemeta , ii-tag tags, ulwakhiwo lwe-HTML, ukubethelwa, ukusetyenziswa kwegama elingundoqo, ulawulo oluphezulu, njl.
Kodwa abakuxeleli yonke into ekufuneka uyenzile, bakucebisa ukuba wenze ngcono indawo yakho. Ke ikukuwe ukuvavanya ukusetyenziswa kwemifanekiso, ukusetyenziswa kwevidiyo, ukwakheka kwesiza, ukukhangela, njl njl, ukuze kulungiswe, kufuna ukuba:
isenzo -Oko kuthetha ukuba kufuneka wenze into!
uvavanyo -Oko kuthetha ukuba wenza indlela okanye inkqubo yokuvavanya utshintsho.
Ukulinganisa -Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ulinganise iziphumo zotshintsho olwenzayo kwisiza ukuze uxele ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo.
Funda Into kwenye indawo
Kukho iingxaki ezimbalwa kwifayile ye- funda okuthile kwenye indawo Isizathu sokungasebenzi:
The isikhathi Ingcebiso enikiweyo inokuba iphelelwe lixesha kunye neendlela zangoku zokuphucula iinjongo zeinjini yokukhangela. Umzekelo, ungafunda inqaku elihle kubunini… kodwa ayisayixhaswa nguGoogle.
The umthombo yeengcebiso inokungabikho kwaphela imeko ongena kuyo. Mhlawumbi ingcebiso ibonelelwe ngendawo yeshishini, okanye indawo yendawo, okanye indawo enokusetyenziswa okuphezulu kweselfowuni… loo ngcebiso inokuthi isebenze okanye ingasebenzi okanye ingabekwa phambili kwindawo yakho.
Kungoko… ulungiselela. Kwaye ukuba usebenza nenkampani enkulu egcina izicwangciso ze-SEO, uxanduva lukhona ukuqinisekisa ukuba awuyicimi. Kodwa banamava ke akukho mfuneko yokuba iqela lakho lihambe funda okuthile kwenye indawo.
The funda okuthile kwenye indawo isizathu kufuneka sihambe. Uya kufumana izizathu ezizigidi kwiwebhu zokungasebenzi, kodwa xa into oyenzileyo ingasebenzi, awunakulindela iziphumo ezahlukeneyo de wenze utshintsho. Esi sisitshixo sokwenza ngcono-qhubeka nokuvavanya iindlela ezahlukeneyo ukuze ubone ukuba yeyiphi eyona nto isebenzayo. Sukulahla nantoni na ngaphandle kokuba, umzekelo, uGoogle ubonelele ngomyalezo ocacileyo wento ekufuneka uyenzile okanye ungayenzi. Umzekelo, uGoogle ukuxelele ukuba ungaze uhlawule amakhonkco. Ke sukuyenza.
Yonke enye into ivulekile ukulungiselela ukusebenza. Yeka ukuza nezizathu kwaye uqalise ukulungisa indawo yakho ngoku!
tags: Thatha inyathelo!Ukulinganisafunda okuthile kwenye indawoenjini yokukhangela nounindlela yokukhangelainkqubo yolwazi lokukhangelaSEOuvavanyo
Akukho sikhokelo seHype kwindalo yokuDalwa
5 I-imeyile yeTrend Trends ekufuneka uyithathele ingqalelo